Gisella - Ilay hany lalana - Countdown to the Kingdom
Izahay dia	Gisella Cardia	amin'ny 3 Oktobra 2020:
Anaka, misaotra an'izay namaly ny antsoko tao am-ponareo. Ry zanaka malala, sokafy ho an'ny Tompo Andriamanitrao, ny fonao tokana, fahamarinana ary fiainana ny fonao. Anaka, aza matahotra ny fitiavan'Andriamanitra izay hany famonjenao tokana. Anaka, avelao ny tenanareo hiova tsikelikely; amin'ny alàlan'ny fanokafana ny fonao ihany no ahafahanao manana fanahy vaovao, fo vaovao, fiainana vaovao. Ry zanaka, anio no hosatrohana satro-bondrona ahoTamin'ny 3 Oktobra dia nisy lanonana ivelan'ny trano nanorona ny satro-boninahitr'i Our Lady of Trevignano indray mandeha eo alohanao sy eo amin'izao tontolo izao. Mivavaha ho an'ny Fiangonana ary ambonin'izany rehetra izany ho an'ireo nohamasiniko, mba tsy handotoana ny Vatan'ny Zanako; Navelany ho anao rehetra io Fahasoavana io. Ankehitriny dia avelako miaraka amin'ny Tsodrano Masina sy Reny, amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, Amena.
Jereo ny trangan-javatra amin'ny masoandro mandritra ny famerenana ny Magnificat, 3 Okt: https://www.youtube.com/watch?v=njYwsJ78jHY (manomboka amin'ny 2:00). Betsaka ny olona no nitory ity famirapiratan'ny masoandro tao amin'ny toerana fisehoan'ny Marian nanerana an'izao tontolo izao (jereo Fanafoanana ny fahagagana amin'ny herin'ny masoandro nataon'i Mark Mallett).
↑1 Tamin'ny 3 Oktobra dia nisy lanonana ivelan'ny trano nanorona ny satro-boninahitr'i Our Lady of Trevignano
← Edson - Matokia ny Fitiavan'i Jesosy
Luz de Maria - Manomana anao aho →